Yeremia 43 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Nkurɔfo no yɛɛ asoɔden; wɔkɔɔ Egypt (1-7)
Yehowa asɛm baa Yeremia nkyɛn wɔ Egypt (8-13)
43 Na Yeremia kaa Yehowa wɔn Nyankopɔn nsɛm yi nyinaa kyerɛɛ nkurɔfo no nyinaa. Nea Yehowa wɔn Nyankopɔn de somaa no sɛ ɔnkɔka nkyerɛ wɔn no, wannyaw baako mpo. Bere a owiei no, 2 Hosaia ba Asaria ne Karea ba Yohanan+ ne mmarima ahantanfo no nyinaa ka kyerɛɛ Yeremia sɛ: “Asɛm a woreka yi nyɛ nokware! Yehowa yɛn Nyankopɔn nsomaa wo sɛ bɛka kyerɛ yɛn sɛ, ‘Munntu mo nan nnsi Egypt nnkɔtena hɔ.’ 3 Neria ba Baruk+ na ɔretutu gu w’asom sɛnea ɛbɛyɛ a wode yɛn bɛma Kaldeafo no, na wɔakunkum yɛn anaa wɔatu yɛn ase akɔ Babilon.”+ 4 Enti Karea ba Yohanan ne asahene no nyinaa ne ɔman no nyinaa antie Yehowa asɛm, na wɔantena Yuda asaase so. 5 Mmom, Karea ba Yohanan ne asahene no nyinaa faa Yudafo a aka no nyinaa kaa wɔn ho, Yudafo a wɔbɔɔ wɔn hwetee aman nyinaa so a na wɔasan aba sɛ wɔrebɛtena Yuda asaase no so no.+ 6 Wɔfaa mmarima ne mmea ne mmofra ne ɔhene mma mmea ne wɔn* a awɛmfo so panyin Nebusaradan+ gyaw wɔn maa Safan+ ba Ahikam+ ba Gedalia+ no nyinaa, na wɔfaa odiyifo Yeremia ne Neria ba Baruk nso kaa ho. 7 Na wɔkɔɔ Egypt asaase so, efisɛ wɔantie Yehowa asɛm, na wɔkɔe ara koduu Tapanes.+ 8 Ɛnna Yehowa ka kyerɛɛ Yeremia wɔ Tapanes sɛ: 9 “Fa wo nsa sesaw abo akɛse, na fa kosie dɔte mu wɔ baabi a wɔde birikisi atintim fam wɔ Farao fi pon ano wɔ Tapanes no. Yɛ ma Yuda mmarima no nhu. 10 Afei ka kyerɛ wɔn sɛ, ‘Nea asafo Yehowa, Israel Nyankopɔn no aka ni: “Hwɛ, meresoma akɔfa Babilon hene Nebukadnesar* m’akoa no aba,+ na mede n’ahengua besi abo a mede asie yi so, na ɔbɛtrɛw n’ahenni ntamadan mu wɔ so.+ 11 Na ɔbɛba abɛtow ahyɛ Egypt asaase no so.+ Nea ɔfata owuyare no, owuyare bekum no. Nea ɔfata sɛ wɔkyere no no, wɔbɛkyere no akɔ. Na nea ɔfata sekan no, sekan bekum no.+ 12 Na mede ogya bɛto Egypt anyame no afi* mu,+ na ɔbɛhyew wɔn, na ɔbɛkyere wɔn akɔ. Obefura Egypt asaase te sɛ nea oguanhwɛfo fura ne ntama no, na obefi hɔ akɔ asomdwoe mu.* 13 Na obebubu adum* a ɛwɔ Bet-Semes* wɔ Egypt asaase so no pasaa, na ɔde ogya bɛhyew Egypt anyame no afi.”’”*
^ Anaa “obefi hɔ akɔ a obiara renyɛ no hwee.”
^ Anaa “abo adum.”
^ Anaa “Owia Fi (Owia Asɔrefi),” kyerɛ sɛ, Heliopoli.